Ngo otu nke ozi usoro engineering oru ngo na Better Motor e tọrọ ntọala - China Shandong Better Motor
On June 26, ngo otu nke ozi usoro engineering oru ngo na Better Motor e tọrọ ntọala. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd bụ na-elekọta nke emebe na-arụ ọrụ a na oru ngo. Ọ na-zubere ime ikpe ọrụ na njedebe nke Sep. Ugbu a Sanjing Electric Engineering otu na-eme ihe ndị bụ isi nchọpụta.
Isi lekwasịrị nke a ngo bụ soro quality site ọzọ usoro. Na-aghọta n'ịkpọ ndị mmadụ, igwe, ihe onwunwe, na-achị.
Ọzọ usoro nwere ike na-aghọta ezigbo management site ọmụma ebunye si ịtụkwasị iji rụchaa ngwaahịa.
Creat ihe ngwa na ekwentị, nke mere na ndutịm mkpara nwere ike moniter mmepụta ọnọdụ n'ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla site na ngwa.
Anyị ga n'ihu oru ngo ka anya dị ka o kwere omume, ka mma mmepụta arụmọrụ na mpi ike.